Akụkọ - Kedu ka esi meziwanye nkenke igwe akụrụngwa akpaka?
Olee otú iji melite izi ezi nke akpaka ịkpụzi igwe?
Iji meziwanye nkenke nke igwe na-akpụzi akpaka, a na-ejikwa obere nhazi mmiri nke eriri akara ma jikwaa ya. Thekpụzi igwe na-agba ọsọ were were na a pụrụ ịdabere, na haịdrọlik usoro draịva mma ọrụ. Ejiri akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa, nke na-ebelata ogo dị elu na njikwa njikwa nke ọrụ yana ọrụ achọrọ. Ya mere, ịkpụzi ebu dị ezigbo mkpa.
Igwe na-akpụzi ihe nwere ọtụtụ usoro. Site na usoro extrusion, aja aja dị mfe iji mee ka extrusion na-asọpụta n'oge nrụpụta mgbagwoju anya. Teknụzụ ihe ọmụma abụọ a dị mfe iji, mana ha abụghị ụzọ dị mma iji mee ebu n’onwe gị. Na usoro igbe igbe oyi, enwere ike idozi oke nke ebu iji belata ọnụahịa nke ebu aja na ihe nkedo. Ofgwọ aja na-akpali akpali dịkwa oke elu. The elu bonding ruru nke green ájá, ala arụmọrụ nke oyi igbe ịkpụzi technology.
Standardkpụrụ ọkọlọtọ ugbu a bụ iji usoro ịkpụzi igbe oyi maka ihe nkedo nwere ụdị na nha dị mgbagwoju anya. Na mgbakwunye, jiri ya tụnyere ájá ebu ihe nkedo multi-alloy Co., Ltd. ụlọ ọrụ. Enwere ike ịhụ ya site na isi ọrụ na-arụ ọrụ na n'ihi kemịkal resin na igwe na-akpụzi ihe na-enweghị atụ, enwere ike ịmepụta ihe nkedo dị elu na ọnụ ala, nke na-emeziwanye usoro mmepụta nke nfuli na ígwè ọrụ ntanetị, ma belata ọnụ ọgụgụ nke castings emepụta na a ala na-eri. Ọrụ a chọrọ. Nkedo igwe oyi isi igbe isi Ndinam technology bụ isi mmepe.
Post oge: Mar-02-2021
Sandbox, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Punch Out igwe, Nkedo Nkedo Flask, Flask akpụzi Machine, Flask Nkedo,